Ingca yokuma komhlaba yabaThengisi kunye nabaThengisi | I-China Landscape Grass yeMveliso yoRhwebo
Ingca yenyani yePlaygro ...
Ingca yommandla wePlaygro ...
Ingca yokuma komhlaba yeGalufa-86
Ingca yokuma komhlaba yeGalufa-34
Ingca yokuma komhlaba yeGadi-326
Ingca yokuma komhlaba yokuThengisa-111
ISIXEKO KUNYE NEMIMA YOSHISHINO YENZA ISIXEKO! Indawo yeWanhe Grass yesixeko kunye nommandla wentengiso sisisombululo esisingqongileyo phantse kuyo yonke indawo esixekweni. Inika indlela yoyilo yokwakha iindawo ezingaphezulu eziluhlaza ebantwini. Ngolondolozo lwayo olusezantsi, ikwayindlela eneendleko ezifanelekileyo zesixeko kunye neendawo zorhwebo. Ukufakwa kwayo ngokulula kuvumela ixesha elifutshane kakhulu lokwakha kunengca yendalo. Umbala we-PE + PP Umbala njengemifanekiso nganye okanye ngentando yakho ...
Ingca yokuma komhlaba yokuThengisa-321W
Ingca yokuma komhlaba yokuThengisa-344
Ingca eyiLandscape yeNtengiso-90E
Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba, Ingca yebhola eTurf, Ingca eyenziweyo, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ingca yeGalufa eyenziweyo,